अमेरिकामा साथीभाई तथा परिवारलाई किन ऋण दिनु हुदैन? - Enepalese.com
विजय थापा २०७७ जेठ १२ गते २१:४८ मा प्रकाशित
शेक्सपियरले भनेका छन् ,पैसा सापटी साथीभाईलाई नदिनु । भनिन्छ ,ऋण नलिनु र ऋण नदिनु । तर अमेरिकामा यो कुरा असम्भव छ । ऋण नै ऋण ले चलेको देश । अमेरिकामा सापटी बित्तिय संस्था तथा बैंक संग लिने चलन हुन्छ । उनीहरु सापटी दिन नै स्थापना गरेका हुन्छन । तर ब्याज ठटाएर लिन्छन ।
सापटी दिएको कारण मानिसले साथीभाई तथा आफन्त गुमाउने गर्छन । पैसाको कारण मानिसको सम्बन्ध बिग्रिएको हामीले भोगेका छौ । अमेरिकामा हरेक हप्ता ५ देखि १० वटा बिजक (बिल ) तिर्नु पर्ने हुन्छ । सबै भन्दा ठूलो थाप्लोमा परेको ऋण भनेको घर को हुन्छ । ३० बर्ष सम्म टाउकोमा परेको ऋण चुकाउदा चुकाउदै जीवन बित्दछ । अमेरिकामा साथीभाई तथा परिवारलाई किन ऋण दिनु हुदैन यस्ता छन् १० वटा मुख्य कारणहरु :
१ ) समय नतोकिएको (खुला -अन्त) ऋण :
नजिकका पारिवार तथा घनिष्ट साथीभाई संग गरिने ऋण या सापटीको लेनदेन भनेको समय अवधि नतोकिएको (खुला -अन्त) ऋण हुन्छ । यस्तो ऋणमा लिने र दिने दुवैले कहिले पैसा फर्काउने भन्ने मिति र तिथि समय अवधि तोकिएको हुदैन । साथै दिएको ऋणमा ब्याज पनि तोकिएको हुदैन । ऋण दिनेले कहिले पाउने र ऋण लिनेले कहिले फर्काउने भन्ने नै निश्चित हुदैन ।
यसरी दिइएको ऋणको कारण दिनेलाई तनाव हुने र आफूलाई चाहिएको बेलामा नपाउने हुनाले सम्बन्ध चिरा पर्न जाने हुन्छ । सकिन्छ भने ऋण लिनु नै नराम्रो र दिनु पनि नराम्रो ।
२ ) ऋण भुक्तान प्राथमिकतामा नपर्ने : समय नतोकिएको (खुला -अन्त) ऋण लिनेले दिनेलाई कहिले फर्काउने र कस्तो प्रकारको आपत पर्न सक्छ भन्ने कुराको ज्ञान हुदैन । र आफु संग भए पछि मात्र दिने सापटी दिनेलाई भुक्तान गर्ने सोचिने हुनाले ऋण दिनेका आकस्मिक र भै परि आउने समस्या नबुझ्ने हुनाले ठुलो समस्या आई पर्द्छ । किनभने ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन । र ब्याज माथि ब्याज तथा ढिलो भुक्तान गरे वापत थप अन्य दण्ड पनि तिर्नु पर्दैन । सापटी दिने र लिने बीच समय अवधि तोक्नु पर्ने अनिवार्यता हुन्छ । यसो गरेमा सम्बन्ध राम्रो भै रहन्छ । र ऋण लिए पछि प्राथमिकतामा पार्नु पर्छ ।
३ ) सापटी ऋण माग्न अप्ठारो पर्ने : साथीभाई तथा परिवारलाई दिएको ऋण माग्न अप्ठ्यारो पर्छ । नातागोता ,आफन्त र घनिष्ठ मित्रताको कारण माग्न निकै गार्हो हुन्छ । कहिलेकाही दिएको सापट माग्दा एक प्रकारको नरमाइलो जस्तो लाग्न सक्छ । यसरी दिएको ऋण माग्दा ऋण लिनेले दिने समय अवधि नतोकेको कारण छिटो माग्यो भनि आश्चर्यमा पर्ने र चित्त पनि दुखाउने गर्छन । माग्नेले भन्दा ऋण लिनेले छिटो माग्यो भनेर उल्टै रिसाउने हुन्छन । खाए पछि ऋण दिनु पर्छ । पचाउने नियत कदापी गर्नु हुदैन । हाम्रो समाजमा पचाउने धेरै पनि हुन्छन । सजग हुनु पर्छ ।
४ ) ऋणको कारण पारिवारिक भेला खराव बनाउन सक्छ : यदि साथीभाई तथा आफन्त बीच सापटी लेनदेन गरिएको छ भने पारिवारिक जमघटमा निकै अप्ठ्यारो पर्दछ । आफुले कसैलाई ऋण दिएको हुन्छ भने आफूले पनि ऋण लिएको हुन्छ । सापटी ढिलो बुझाएको कारण यसरी बोलाएको भेलामा सापटी माग्ने डरले सहभागिता पनि नहुने देखिन्छ । आफूले उ संग ऋण लिएको छु दिन सकिन भन्ने आफूलाई पर्ने र ऋण दिएकोलाई पनि यसले अहिले सम्म दिएको छैन भन्ने सोच पर्ने हुन्छ । साथीभाई तथा पारिवारिक भेटघाट यही ऋणको कारण खल्लो पर्ने पनि हुन्छ । यस्तो कारणबाट बच्न यस्तो खालको सम्झौता गर्नु पर्छ कि ऋण दिने र लिने बीच असमझदारी हुनु नपरोस ।
५ ) ऋण लिने सेवक बन्ने र ऋण दिने मालिक हुने : बाइबल मै भनिएको छ ,ऋण लिने सेवक हुन्छ । वास्तवमा ठीक कुरा पनि हो । ऋण लिए पछि सदैव सानो परिन्छ । ऋण लिए पछि तल परेर बस्नु पर्ने पनि हुन्छ । ऋण दिनेको अगाडी ठूलो कुरा गर्न पनि नमिल्ने हुन्छ । ऋण लिने मानिस सदैव पानीमा भिजेको बिरालो जस्तो पनि हुन्छन । तर यसरी सोच्नु पनि हुदैन । अमेरिकामा सबैको ऋण टुप्पी सम्म हुन्छ । यसरी नै अमेरिकन जीवन संचालन भै रहेको हुन्छ । आफूले ऋण लिएको छु भन्दैमा हिनताबोध गर्नु पनि हुदैन । अमेरिकामा कस्को ऋण हुदैन ? सबैको हुन्छ ।
६ )ऋणीले अझ ऋण माग्न सक्ने : एक पटक ऋण दिए पछि ऋण दिनु कता हो कता अझ माग्न पनि बेर लगाउदैनन । ऋण फच्चे गर्नु भन्दा अझ थप ऋणको अपेक्षा समेत गर्ने हुन्छ । आफूले यसरि ऋण निरन्तर दिई रहने क्रियाकलाप बन्द गर्नु पर्छ । माग्नेले पनि औला दिंदा ड़ूडिल्नो निल्ने भनेको यही हो ।
७ ) तपाईं आफ्नो मित्र वा पारिवारिक सदस्यलाई सहयोगको सट्टा सक्षम बनाउन सहयोग गर्ने : आपत बिपतमा सापट दिएर समस्या समाधान गर्न दिएको ऋण ठिक बिपरित उक्त रकमले अर्को दाउ गरि अन्य फजुल खर्चमा समेत गर्ने गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना साथीभाई र आफन्तलाई आर्थिक व्यवस्थापनको मूल मन्त्रहरु बारेमा जानकारी दिनु पर्ने हुन्छ । सापटी दिएर समस्या किनारा लागोस भन्ने ऋण दिनेको सोच भएता पनि बिलासिता तथा अन्य चिजको खरिदले उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउने हुने हुँदा यस्तो गर्नु हुदैन ।
८ ) साथीभाई/पारिवारिक ऋण बिनाब्याजको हुने : ब्याज भनेको कुरा साथीभाई तथा परिवारमा चल्दैन । नेपाली समाजमा यस्तो चलन पनि हुदैन । परिवारका सदस्य तथा साथीभाई संग ब्याज भन्ने शब्द नै हुदैन । त्यसैले साथीभाई र आफन्त हुन् । आफन्त र साथीभाईलाई दिएको ऋणमा कुनै ब्याज भनिदैन । शायद यसै कारण ऋण लिनेहरु ढुक्क हुने गर्छन । यदि ब्याज दिने पर्ने हो भने एक प्रकारको तनाव भै रहने हुन्छ । साथीभाई तथा आफन्तमा ब्याज भन्ने कुरा चलायो भने असजिलो वातावरण बन्दछ । अमेरिकामा बैंक तथा बित्तिय संस्था जस्तो ब्याज दर नलगाएता केही मात्रामा लगाउन सक्यो भने छिटो दिएको ऋण चुक्ता हुने सम्भावना पनि हुन्छ ।
९ ) तपाईलाई पैसाको किन आवश्यकता पर्छ : आफूले विश्वास गरेर ऋण दियो र आफूलाई आपत पर्दा पाईदैन भने ऋण दिनु हुदैन । झन् अमेरिका जस्तो देशमा ३ जना परिवार मध्ये आकस्मिक रुपमा एक जनाको जागिर जाने हुँदा भै परि आउने खर्चको लागि आफू तयार भै रहनु पर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा दिएको ऋण प्राप्त गरिएन भने के काम लाग्यो ? आफ्नो घर लिलाम हुन् लाग्यो र जागिर गयो भने आफुले दिएको सापटी पाइएन भने निकै सकस हुन्छ । र ,ऋण लिनेले पनि यस्तो कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ । ऋण लिनेले यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । यदि तपाई आर्थिक रुपले समस्यामा पर्ने संकेत देख्नु हुन्छ भने स्पष्ट संग ऋण दिन सक्दिन भन्न सक्नु पर्छ । यसैमा तपाईको भलाई छ । तपाई यसमा ईमान्दारीपूर्वक आफ्ना कुरा राख्नु भयो भने बच्नु हुनेछ ।
१० ) ऋणको कारण आफ्नो पैसा पनि सम्बन्ध पनि गुमाउने : शेक्सपियरले ” पैसा सापटी साथीभाईलाई नदिनु ” भने झैँ सापटी नदिनु नै उत्तम हुनेछ । सकिन्छ भने कसै संग ऋण नलिनु पनि र ऋण नदिनु पनि । यो कुरा लेखेर राखौ ,परिवार भित्र दिएको ऋण समयमा आउदैन । र ,तपाईको सम्बन्ध ऋण दिनु भन्दा अगाड को जस्तो कहिले सामान्य अवस्थामा कहिले फर्कदैन । जसको कारण तपाई भित्र भित्रै तनावमा पर्ने ,क्रोधित हुने आउने ,रिसाउने र सम्बन्ध बिग्रिने हुने हुँदा सापटी लिने काम कसैलाई गर्नु नपरोस । सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने हो भने ऋणको ‘रि’ पनि उच्चारण गर्नु नपरोस ।
अमेरिकामा ऋण नपाइदा धन्यबाद कोसिस गर्नु भयो तर सकिएन भनि कृतज्ञता ज्ञापन गरिन्छ । तर नेपालमा ऋण पनि माग्नु ऋण पाइएन भने सातो लिने ,सराप्ने ,ठूलो भएछ ,हामीलाई नपत्याएको ,हाम्रो पनि पालो आउछ आदी ईत्यादी कुराहरु भनिन्छ । उल्टै रिसाइञ्छ । ऋण भनेको पाइन्छ पनि नपाइने पनि हुन्छ । ऋण आफ्नो मामा ,काका ,बुवा ,आमा ,हजुर बुवा तथा तपाईको पुर्खाले कमाएर तपाईलाई ठिक्क परेको राखेको कदापी हुदैन ।
राजीखुशी ऋण दिन मन छ र ऋण लिन सकिन्छ भने ऋण को लेनदेन गर्न सबैलाई छुट छ । कसैले कसैलाई ऋण दिन्छ भने टाउको दुखाई गर्नु भएन । दिन सक्नेले दिदा हुन्छ । ऋण लिन सक्ने र तिर्न सक्नेले आफन्त र साथीभाई संग लिन सकिन्छ । हामी नेपालीहरु बिदेशमा यसरी आपत बिपतमा समस्या समाधान गरि रहेका हुन्छौ । तर माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु र बुदाहरु घोत्लिएर सोच्नु होस् । हाम्रो सम्बन्ध कहिले नबिग्रियोस । हाम्रो सम्बन्ध दिर्घकालिन रुपमा चलोस ।
यदि तपाई राम्रो र असल बन्न चाहनु हुन्छ भने सके सम्म साथीभाई तथा परिवार संग ऋण लिनु नै बेस । साच्चै भन्ने हो भने ऋणको कारोबार नै गर्नु हुदैन । झन् अमेरिका जस्तो देशमा जागिरको ठेगान नहुने र कतिखेर जागिर हिड्ने हो भने अवस्थामा आफैले संचित गरेर भै परि आउने समस्या संग जुध्न सक्ने आफुलाई बनाउनु नै उत्तम हुनेछ । ऋणको सवालमा शिष्टता संग ऋण दिन सक्दिन भनि मुखमा जवाफ दिनु नै उत्तम हुने छ । यसो गरेमा सम्बन्ध राम्रो हुने छ ।
स्रोत विभिन्न पत्रपत्रिका /मनि क्रासर्स डटकम